आफूलाई कसरी मजबुत बनाउने ? एक पटक पढ्नै पर्ने लेख – Akhabar Post : Daily Online News From Nepal
आफूलाई कसरी मजबुत बनाउने ? एक पटक पढ्नै पर्ने लेख
कार्तिक १७ ,तिमीलाई चट्टान किन कडा लाग्छ रुकिनकी तिम्रो हात चट्टानभन्दा कम कडा छ । तिमीलाई फलाम किन बलियो लाग्छ किनकी तिम्रो हात भन्दा फलाम बलियो छ । तिमीलाई आगोले किन पोल्छ , किनकी तिम्रो हात आगो भन्दा कम् तातो छ ।
जब तिमी सानो हुन्छौ कमजोर हुन्छौ हर चिजले तिमीलाई सताउछ , हर परिस्थितीले तिमीलाई घात गर्छ । महङी बढ्यो भनेर चिन्ता नमान , महङ्गी त बढ्ने नै हो तिमीले यसलाई रोक्न सक्दैनौ , तिमी आफ्नो आम्दानी बढाउ ।परिक्षा गाह्रो छ भनेर चिन्ता नमान आफूले गतिलो तयारी गर । अवसरहरू कम भए भनेर दुखी नहोउ ,आफूलाई बलियो प्रतिस्प्रधी बनाउ ।
एउटा भनाइ छ गहिराइले के फरक पार्छ जसलाई पौडी खेल्न आउछ, उचाइले के फरक पार्छ जसलाई पखेटा चाल्न आउछ ,दुरिले के फरक पार्छ जसलाई पाइला सार्न आउछ । क्षमता र प्रयासका अगाडि चुनौतिले घुडा टेक्नै पर्छ । एक पटक बुद्धका सामु एक ब्यक्ती आएर भन्छन कि ूभगवान मलाई सानो सानो समस्याले पनि साह्रै दुस्ख दिन्छ मैले के गर्ने ? बुद्धले उनलाई एक कचौरा भरि पानी ल्याएर त्यसमा चार चम्चा नुन घोल्न लगाउछन ।
यसरी कचौराको पानीमा सम्पूर्ण रुपमा नुन घुले पछी बुद्धले ती ब्यक्तिलाई कचौराको पानी पिउन लगाउछन । जब कचौराको पानी उनले पिए , तब बुद्धले सोध्छन पानी कस्तो छ ? ती ब्यक्तिले आफ्नो मुख बिगार्दै झर्किदै भन्छन (साह्रै नमीठो , साह्रै चर्को नुनिलो , यस्तो पानी किन पिउन लगाएको ? बुद्धले केही जवाफ दिदैनन र ती ब्यक्तिलाई नजिकैको ठुलो पोखरिको नजिक लैजान्छन । ठुलो पोखरिमा पनि त्यसै गरी चार चम्चा नुन घोल्न लगाउछन ।
पोखरिमा चार चम्चा नुन घुले पछी फेरी बुद्धले उनलाई पोखरिको एक कचौरा पानी पिउन लगाउछन र सोध्छन पानी कस्तो छ ? ती ब्यक्तिले खुशी हुँदै भन्छन यो पानी त मीठो छ , पटक्कै चर्को छैन । यस्तो कुरा सुनेपछी बुद्धले मुस्कुराउदै भन्छन (तिम्रो जीवनका समस्याहरू भनेका पनि यही चम्चाको नुन जस्तै हुन, तिमीले त्यसलाई कचौरामा घोल्छौ भने त्यसले तिमीलाई सताउछ यदी बिशाल पोखरिमा घोल्छौ भने त्यसको प्रभाव नगन्य मात्रामा पर्छ ।
यदी तिम्रो जीवनमा समस्या आयो भने आफूलाई बढाउ , समस्या आफसे आफ सानो भएर जान्छ । यदी आफूलाई सानो र कमजोर सोच्दछौ भने समस्याले तिमीलाई साह्रै नराम्ररि थिचिदिन्छ ।बुद्धको कुरा सुनेर ती ब्यक्ती प्रशन्न हुन्छन । भनिन्छ जब आकाशबाट बादल बर्षिन थाल्छ , सबै जसो चरा चुरुङीहरू आफ्नो टाउको लुकाउनको लागि सुरक्षित गूड् तिर भाग्छन् तर चील भने एउटा यस्तो पंक्षि हो जुन बर्सिरहेको बादल भन्दा माथि जान्छ ताकी एक बूँद पानीले पनि आफूलाई भिजाउन नसकोस
जबकी बादल माथि जान नसक्ने अरु पन्क्षीहरू भने या त पानीमा निथ्रुक्क भिज्न वाध्य हुन्छन या त साहाराको लागि गुँडमा ओत लाग्न वाध्य हुन्छन तर बादल भन्दा पनि माथि को उचाइमा उड्ने साहस गर्ने चिल भने तल धर्तिमा पानी पारीरहेको बेलामा पनि मज्जासँग बादल भन्दा माथि पुगेर चारै तिर उडान भरिरहेको हुन्छ । यसर्थ समस्यासँग भागेर होइन समस्याभन्दा माथि उठेर नै हामीले जीवनमा प्रगती गर्न सक्छौ ।
आउनुहोस् म तपाईंलाई हीरा र कोइलाको बारेमा बताउछु । हामीलाई थाहा छ कोइला कालो हुन्छ । कालो कोइलालाई कसैले पनि आफ्नो हातमा लिन चाँहदैनन, कोइलालाई एक पटक मात्र छोयो भने पनि त्यसले छुनेवालाको हातमा कालो नराम्रो दाग लगाइदिन्छ । तर हिरालाई सबैले मन पराउछन,हिरा कोइलाजस्तो कालो हुँदैन बरु हिरा चम्किलो हुन्छ,उज्यालो हुन्छ । चम्किलो हिरालाई मान्छेहरूले हातमा लिने मात्र होइन गलामा माला नै बनाएर लगाउछन र आफूलाई भाग्यशाली सम्झिन्छन ।
शायद तपाईंलाई थाहा नहोला सबैले मन पराउने बहुमूल्य पत्थर हिरा त्यही कालो र सबैले छि -छि ,दुर- दुर गर्ने कोइलाबाट नै बनेको हुन्छ । कोइलाबाट हिरा कसरी बन्छ त ? कोइलाबाट हीरा यत्तिकै सजिलै बन्दैन जब कोइलाले जमिन मुनी अत्यन्तै धेरै ताप र चाप सहन्छ तब ऊभित्र एउटा छुटै ट्रान्सफर्मेसन आउँछ फलस्वरुप ऊ एउटा सामान्य, निम्न मूल्यको, कालो कोइलाबाट असामान्य, उच्च मूल्यको, चम्किलो हीरा बन्न पुग्छ ।
हामी पनि कोइला जस्तै छौ, जब हामी अधिक ताप र चाप रुपी सङ्घर्षबाट गुज्रिन्छौ हामी पुरानै अवस्थामा रहदैनौ हामी एउटा बहुमूल्य हीरा जस्तै उच्च कोटीमा दर्ज हुन पुग्छौ । सहि दिशाको मेहनेत र परिश्रमले सधैं हामीलाई निखार्छ र मूल्यवान बनाउछ । जब तिमी संघर्षबाट भाग्नेछौ तिमि सधैं कोइला नै रहनेछौ, हिरामा बदलिनु छ भने ताप र चाप सहनै पर्छ ।
त्यसैले एउटा भनाइ छ यदी तिमि नरकको बाटो हिड्दै छौ भने आफ्नो यात्रालाई जारी नै राख किनकी नर्क पछी आउने त स्वर्ग नै हो । यो भनाइले पनि हामीलाई कठिन परिस्थितीमा हिम्मत नहार्न प्रेरणा दिन्छ । हामीले जब जीवनमा केही दुस्ख कष्ट झेल्नुपर्ने हुन्छ तब हामी बिचलित हुन्छौ । आफूले गर्दै गरिरहेको कर्मलाई पनि चटक्क छोड्न पछी पर्दैनौ ।
तर खास कुरा के रहेछ भने हाम्रो अगाडि आइपर्ने चुनौती र दुस्ख कष्टले मात्र हाम्रो क्षमताको सहि परिक्षण गरेर हामीलाई अझ बढी बलियो बनाउन मद्दत गर्दा रहेछन । एक पटक महान दार्शनिक नित्सेले भनेका छन The Pain that Doesn’t Kill You Makes You Stronger अर्थात तिमीलाई दुख आइलाग्छ तर यदी त्यो दुखले तिमीलाई मारेन अर्थात पराजित गर्न सकेन भने सम्झ तिमी अझ बलियो बन्यौ ।
जब हुरी चल्छ त्यसले रुख बिरुवालाई अझ शसक्त र बलियो बन्न घच्घचाइरहेको हुन्छ ।त्यसैले भनिन्छ युद्धमा जितेको भन्दा हारेको सिपाही बलियो हुन्छ किनकी हारेको सिपाहीले मात्र सबसे बलियो चोट खपेको हुन्छ । वास्तवमा पिडा र सङ्घर्ष जित्न सक्ने हो भने के हुन्छ म एक कहानी जोड्छु । एक पटकको कुरा हो साँझको समयमा एक मन्दिरको बलेसिमा रहेको ढुङ्गाले मन्दिर भित्र रहेको ढुङ्गासँग बढो गुनासो गरिरहेको थियो ।
बलेसिमा राखिएको ढुङ्गाले मन्दिर भित्रको ढुङ्गालाई भन्दै थियो कि साथी साथी हेर न , तिमी पनि ऊ त्यो पहाडको टुप्पोबाट आएको म पनि त्यही बाट आएको , तिमीलाई पनि नदिले बगाएर बगरमा फ्याकेको मलाई पनि नदिले ल्याएर बगरमै फ्याकेको , त्यती मात्र कहाँ हो र साथी यो मन्दिर बनाउने बेलामा तिमीलाई र मलाई सँगै यस् मन्दिर प्राङ्गणमा ल्याइएको तर पनि हेर त साथी तिमीलाई मानिसहरुले मन्दिरको छानो भित्र त्यती राम्रो सिट मा राखेका छन तर मलाई मन्दिर बाहिर बलेसिमा राखेका छन , जब बर्षा हुन्छ मैले भिज्नु पर्छ जब घाम लाग्छ मलाई घाममा सेकिनु पर्छ ।
त्यती मात्र कहाँ हो र साथी जो मान्छेले तिमीलाई हरेक दिन फूल प्रसाद दुध चढाएर ढोग्छन ती मान्छेले मलाई आची कुल्चेका जुत्ताले कुल्चिएर जान्छ । तिमी र म ढुङ्गा -ढुङ्गा भैकन पनि हामी बीच किन यात्रो भेदभाव साथी किन यत्रो भेदभाव रु आफ्नो साथीको यस्तो कुरा सुनेपछी मन्दिरभित्रको ढुङ्गाले भन्छ हो साथी तिमीले ठीक भन्यौ तिमी र सँगै पहाडको शिरबाट नदी बगरमा आएको ,तिमिलाई र मलाई मन्दिर बनाउने बेलामा सँगै मन्दिर आगनमा ल्याइएको
तर जब मुर्तिकारले आफ्नो हातमा घन र छिनो ल्याएर तिमिमाथि के एक चोट प्रहार गरेको थियो तिमीले मुर्तिकारको चोटलाई सहन सकेनौ , तिमी भित्रैबाट दुई चिरा बनेर टुट्ट्यौ त्यसैले तिमीलाई जुत्ता चप्पल पुछ्नको लागि बलेसिमा राखियो तर जब मुर्तिकारमा म माथि घन र छिनो प्रहार गर्थ्यो , मैले आफूलाई कहिलै भित्रबाट टुट्न दिइन र प्रत्येक चोटहरुलाइ सहे, अन्तत म एक सामान्य चट्टानबाट मूर्ती ढुङ्गा बन्न सफल भएँ ।
यसर्थ मान्छेहरूले मलाई सम्मान गरेका हुन ,यसर्थ मान्छेहरुले मलाई पूजा गरेका हुन । आफ्नो कुरालाई बीट मार्दै मन्दिर भित्रको ढुङ्गाले बलेसिको ढुङ्गालाई भन्छ , यसैले साथी मैले जीवनमा एउटै कुरा सिकेँ कि जीवनमा सबै चोट खानेहरु सफल हुँदैनन , तीनै ब्यक्ती सफल हुन्छन जसले प्रत्येक चोटहरूलाई खप्ने साहस गर्छन् । लेखक शिक्षा क्षेत्रका चर्चित मोटिभेटर हुनुहुन्छ
समानुपातिक उम्मेदवारको सूचिमा हतियारधारी ल्यारक्याल लामादेखि नायिका करिश्मासम्म